Kenya oo ka hadashay tallaabada lagu eryay Safiirkeedii Somaliya | Dhacdo
Xukuumadda Nairobi ayaa si kooban oo taxadar badani uu ka muuqdo uga hadashay tallaabada ay Somaliya xiriirka ugu jartay, ka dib markii Safiirkii Muqdisho lagu wargeliyay in uu dalka isaga baxo.
Somaliya ayaa dib ugu yeeratay Safiirkeedii u fadhiyay Kenya, Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, inkastoo maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa Magaalada Muqdisho.
Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya, Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya ka xun tahay tallaabada, ay Somaliya dib ugu yeeratay Safiirkeedii Kenya.
Xoghayaha oo la hadlay Wargeyska The Nation ayaan ku dheeraan ka hadalka amuurtaan, balse waxa uu ballanqaada in labada dal, ay si diblomaasiyadeed uga wadahadli doonaan.
“Waxaan si rasmi ah uga jawaabi doonnaa wadiiqooyinka ku haboon, dhawaan.” Ayuu yiri Macharia Kamau, Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya.
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaa wareysi uu siiyay BBC wax looga weydiiyay saamaynta ka dhalan karta tallaabada lagu ceyriyay Safiirkii Kenya, waxaana uu sheegay in wax badani ay xumayn karto, xilli labada dal ay yihiin kuwo deris ah, oo aan kala maarmi karin.
“Wax badan ayay qaribi kartaa, laba wadan oo kala maarmi kara maaha. Jaarku ma kala maarmo, is nebcaada ama is jeclaada, Ilaahay baa iskiin baday waaye, oo lama kala guuri karayo.” Ayuu yiri Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar
Prof. Samatar ayaa xusay in Dowladda Federaalka ay uga gudbi karto faragelinta ay ka cabaneyso in marka hore ay ixtiraamto shuruucda dalkeeda, isla-markaana ay kasbato kalsoonida dadkeeda.
Labada dowladood ayaa ku guuldareystay inay hagaajiyan xiriirkooda, oo muddooyinkii ugu dambeysay uu xumaa.